Andro: 18 mey 2020
Minitra farany: Nanambara ny curfew tany amin'ny tanàna 81 i Erdogan nandritra ny fankalazana
Taorian'ny fivoriana kabinetra, ny minitra farany avy amin'ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan, izay nanao fanambarana, dia nampihatra fantsom-pandrika tany amin'ny faritany 81 nandritra ny lanonana. 23-24-25 sy 26 Mey 2020 (anisan'izany ny 23 sy 26) [More ...]
Iza moa i Süleyman Reyhan?
Teraka tao Karamürsel izy tamin'ny 1970. Taorian'ny nahazoany diplaoma tamin'ny Sekolin'ny Imam-Hatip, dia nanomboka ny fianarany tao amin'ny oniversite tao amin'ny Anadolu University Faculty of Business Administration ny taona 1989. Taorian'ny fizarana diplaoma dia nahavita ny internant consulting consultant ara-bola izy. Eskişehir Osmangazi University Faculty of Education [More ...]
Kabinetra fanadiovana izay mamono Coronavirus ao anatin'ny 30 segondra
Profesora momba ny fikarohana habetsahana ao amin'ny Oniversite Maltepe. Dr. Afif Sıddıki sy ny ekipany dia nanamboatra kabinetra disinfection mba hiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny marary amin'ny otrikaretina amin'ny alàlan'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus. Maltepe University Engineering and Natural science [More ...]
Tsoan'ny Cargo Tiorka avy any İzmir
Tiorka Cargo (THY), ilay marika an'ny Turkish Airlines, izay nahatratra ny tahan'ny fitomboana avo indrindra eo amin'ireo mpitatitra fiarabe an'habakabaka ambony indrindra 25, mitondra an'i Izmir amin'ny 28 Mey, ary misy fiaramanidina isan'andro. [More ...]
Fiaran-dalamby voalohany azo nafindra tany Eropa niaraka tamin'i Marmaray
Mars Logistics nanomboka ny 15 Mey lalamby fivezivezena an-dalamby nampiharina tany Torkia nanomboka tamin'ny fotoana voatondro ho fampiasa voalohany tany Marmaray. Gökşin Günhan mpikambana ao amin'ny Birao Logistics dia nilaza fa ny tsipika Marmaray [More ...]
Sina: Fiandohana ho an'ny fanadihadiana Covid-19
Efa nanambara i Sina fa vao maraina vao hanomboka ny fanadihadiana Covid-19. Minisiteran'ny raharaham-bahiny Shina SözcüNilaza i Sü fa efa vao maraina hanombohana fanadihadiana momba ny fiaviany sy ny fihanaky ny tsimokaretina corona, izay nahatratra olona 300.000 maneran-tany. [More ...]
Hizara Ankaray no haitatra any Mamak miaraka amin'ny sehatra 8! Fampandrenesana Tender Navoaka
Fiarovana an'i Kovid-19 Nentina tamin'ny fitaterana mpandeha!
Ny minisitra Karaismailoğlu, tamin'ny fanambarany, dia mahatsapa ny fitaterana an-dalambe amin'ny fotoana tena misy miaraka amin'ny Rafitra Electronic Tracking and Control System (U-ETDS), izay manome ny fanaraha-maso elektronika ny entana, ny entana sy ny mpandeha alain'ny orinasa miasa amin'ny fitaterana. [More ...]
Lisitry ny laharana an-tariby TCDD - 2020 ankehitriny
Namboarinay ny telefaon-tariby TCDD fiantsonana nomeraon-telefaona ho anao. Voalohany indrindra, manoro hevitra anao izahay hiantso ny laharana telefaona TCDD ankapobeny 444 8 233. Mba ho tadidinao ny isa, manomboka amin'ny 444 ka hatrany amin'ny efijery fiantsoana an-telefaona [More ...]
Fiarovana Kovid-19 Nentina tao anaty fitaterana mpandeha fiaran-dalamby!
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu dia nanao fanambaràna tamin'ny haino aman-jery tany Lapseki, izay nandehanany nanatanteraka ny lanonana farany teo amin'ireo tilikambo vy niorenan'ny tetezana .anakkale Bosphorus. Karaismailoğlu nanazava ny tetikasan'ny Minisiterany nandritra ny vanim-potoana vaovao, tamin'ny alàlan'ny lalamby [More ...]
Tekirdağ Port Statement de Metropolitan Municipality
Ny Tetikasa Embankment Port of Tekirdağ dia nekena voalohany tamin'ny 1997 tamin'ny alàlan'ny Ministeran'ny Asa vaventy sy Fandaminana. Taty aoriana, voamarina ny seranan-tsambo ity ary nanohy ny asany tamin'ny anaran'i Akport Port. Tamin'ny 2006, [More ...]
Scissors namboarina tamin'ny tsipika Konya Tram
Ny fivondronan'i Konya Metropolitan dia mitohy hatrany ny fanamafisam-peo izay hanamaivana ny fifamoivoizana manerana ny tanàna amin'ny alàlan'ny fanodinana ireo fotoam-pandrindrana ho lasa toerana. Konya Metropolitan Ben'ny tanàna Uğur İbrahim Altay, ny làlana izay misy ny olompirenena [More ...]
Ny fidiram-bolan'ny hetra nitombo 5% tao anatin'ny herintaona ao Istanbul
Ny 45,5 isan-jaton'ny vola azo amin'ny hetra nangonina tany Tiorkia any Istanbul dia nitombo 5 isan-jato ny vola hetra raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ny ampahany amin'ny hetra manokana amin'ny fanjifana ankapobeny amin'ny vola mivoaka amin'ny tetibola dia 21 isan-jato, amin'ny fidiram-bolan'ny hetra [More ...]
Fihetsiketsehana volamena izay hanamaivana ny fifamoivoizana amin'ny fameperana 4 andro ao Izmir
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia nandinika ny asa fanamboarana asphalt haingana amin'ny andro nampiharana ny làlamby. Soyer koa dia nanome ny vaovao tsara sy ny làlana manoloana ny toeram-pivarotana any Gaziemir mankany amin'ny lalana Konak. [More ...]
Toerana fitaterana serasera amin'ny hoavy amin'ny hoavy ao Turkey
Nandritra ny lahateniny nandritra ny lanonana famaranana ny tilikambo Çanakkale 1915, ny filoha Erdoğan dia nilaza hoe: Rehefa vita izany dia i Torkia, [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer dia manafaingana ny hetsika an-dàlety amina bisikileta hiadiana amin'ny habetsaky ny fifamoivoizana izay antenaina hampisondrotra miaraka amin'ny fanavaozana ara-dalàna. Soyer, izay mandeha amin'ny làlany miaraka amin'ny bisikiletany handinika ireo tetik'asa teny an-toerana dia nilaza hoe: "Rehefa nihena ny fihanaky ny valanaretina dia [More ...]
Ao amin'ny Mevlana Development Agency an'ny Repoblika Tiorka, ny laharana faha-5449 momba ny serivisy momba ny sampandraharaham-pandrosoana, ny sampandraharahan'ny sampandraharaham-pandrosoana ho an'ny sampana sy ny sampam-pandrihana sy fikambanany ary fikambanana hafa ary fikambanana hafa mifandray amin'ny ministera No. 4 [More ...]
Namboarina sy novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny TÜBİTAK SAGE sy ASELSAN, nampidirina tamin'ny lakan'ny mpikatroka laser ny sensitif Guided Kit ary nitombo ny fahamarinan'ny baomba tanjona. Ao anatin'ny fanambarana natao tao amin'ny kaonty media sosialy an'ny TÜBİTAK SAGE [More ...]
Ny fandoavana ny fanohanana organika dia natomboka ho an'ny tantsaha!
Minisitry ny Fambolena sy ny Ala Bekir Pakdemirli dia nanao fanambaràna mahakasika ny tohana azo ampiharina amin'ireo tantsaha izay mampiasa zezika voajanahary sy organominaly amin'ny taona 2019. Toy izao ny fanambaran'ny minisitra Pakdemirli; "Ny fandrakofana zavatra voajanahary momba ny tanin'ny firenentsika [More ...]
Ny famokarana herinaratra dia manomboka rahampitso ao amin'ny tohodrano Ilısu
Tiorka, iray amin'ireo tetik'asa fanamboarana herinaratra ilisu mpamokatra herinaratra lehibe indrindra, ny voalohany amin'ny zafikely enina mirahalahy, ny 19 mey Atatürk Commemoration ary ny Tanora sy ny fanatanjahantena natokana. Miaraka amin'ny fomba fanaovana ny kaonferansa an'ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Baskentray famoronan-tsary, Sobika ary vidiny tapakila
Başkentray Ankara dia iray amin'ireo tetikasa nandray anjara betsaka tamin'ny dia ao an-tanàna. Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas ary Ankara, Konya High Speed ​​Train di Ankara [More ...]
Fifanarahana ara-barotra miaraka amin'ny fandraisana an-tanana eo an-toerana sy nasionaly dia hanao hajia
Ny minisitry ny varotra, Ruhsar Pekcan dia nilaza fa hanomboka ny seho virtoaly nokarakaraina ho fanatanterahana ny fitsangantsanganana vaovao coronavirus (Kovid-19) miaraka amin'ny haingo sy kiraro «Shoedexpo» amin'ny 1 jona. [More ...]
Hisokatra ny faran'ny volana jona, Monasitera Sumela hatramin'ny faran'ny Jolay
Ny minisitry ny kolontsaina sy ny fizahantany Mehmet Nuri Ersoy dia nilaza fa efa akaiky ny farany ny asa famerenana amin'ny laoniny faharoa ao amin'ny Bodrum Castle ary mikasa ny hanokatra ny lapa izy ireo amin'ny faran'ny volana jona amin'ny farany. Minisitry ny Ersoy, famerenana amin'ny laoniny ao amin'ny Lapan'ny Bodrum [More ...]
Natsangana ny fotoana fitaterana ny Foiben'ny R&D
Ny vanim-potoana fandefasana ny tatitra ara-bola nataon'ny Ministeran'ny Indostria sy Teknolojia, R&D ary foibe famolavolana, ary ny tatitra momba ny fanamarinana ara-bola ny orinasa amin'ny sehatry ny fampandrosoana ara-teknolojia (TGB) mandritra ny iray volana, hatramin'ny 30 jona 2020. [More ...]
Minisitra Selçuk: Izahay dia niantoka ny fiverenan'ny zaza 17 273 ho an'ny ray aman-dreniny
Zehra Zümrüt Selçuk, minisitry ny fianakaviana, mpiasa ary asa sosialy; "Vokatry ny laharam-pahamehana omenay ny serivisy mifandraika amin'ny fianakaviana, dia miantoka ny fiverenan'ny zaza 2019 ho an'ny fianakaviany tamin'ny taona 17." hita ao amin'ny famaritana. Ny ministera ho an'ny ankizy [More ...]